I-Ultrasonic Nanostructuring yama-Antibiotic - iHielscher Ultrasound Technology
Ukukhiqizwa kwama-antibiotic okusizwa nge-Ultrasonically kungakhuphula ukusebenza kwawo, eben ngokumelene namagciwane amelana nemithi: Inani elandayo lamagciwane amelana nemithi elwa namagciwane kuyinkinga engakaxazululwa yokwenza ukutheleleka kwamagciwane, okuphathwe ngempumelelo ngama-antibiotic emashumini eminyaka adlule, umhlaba wonke usongo lwezempilo futhi. Ukuhlelwa kwe-Ultrasonic nano kwama-antibiotic kuyindlela ethembisayo yokwandisa ukusebenza kwama-antibiotic afana ne-tetracycline elwa namagciwane amelana nemithi.
Ama-Antibiotic kanye ne-Antibiotic-Resistant Bacteria
Imithi elwa namagciwane yenzeka lapho amagciwane afana namagciwane nesikhunta eba nekhono lokuhlula imishanguzo eyenzelwe ukuwabulala. Lokho kusho ukuthi amagciwane awabulawa aqhubeke nokukhula. Izifo ezibangelwa amagciwane amelana nemithi elwa namagciwane kunzima, futhi ngezinye izikhathi akunakwenzeka ukwelashwa.
Ukumelana namagciwane kwamagciwane kubangelwa ukusetshenziswa ngokweqile nokusetshenziswa kabi kwemithi elwa namagciwane. Ukusetshenziswa ngokweqile nokusetshenziswa kabi kubhekisa ikakhulu emibhalweni engafanele nokusetshenziswa kakhulu kwezolimo
Emithini elwa namagciwane ejwayelekile njenge-penicilin, i-tetracycline, i-methicillin, i-erythromycin, i-gentamicin, i-vancomycin, i-imipemen, i-ceftazidime, i-levofloxacin, i-linezolid, i-daptomycin, ne-ceftraroline, izinhlobo ezithile zebhaktheriya ziye zashintsha futhi zakha ukumelana namagciwane.
Imbangela enkulu yokwakhiwa kwamagciwane amelana nemithi elwa namagciwane ilele ekusetshenzisweni ngokweqile nasekusetshenzisweni kabi kwemithi elwa namagciwane. Njalo lapho isiguli sinikezwa ama-antibiotic, amagciwane abucayi ayabulawa. Kodwa-ke, uma kukhona amabhaktheriya amelana nawo, angaqedwa ukwelashwa kwemithi, ayakhula futhi ande. Ngaleyo ndlela, ukusetshenziswa okuphindaphindiwe nokungafanele kwama-antibiotic kubangela ukwanda kwamagciwane amelana nemithi.
Ama-bacterial Multi-Drug Resistant (MDR) ayingozi enkulu kwezempilo ngoba awaphenduli ekwelashweni okuvamile kwama-antibiotic, okufanele kubulawe amagciwane.
Phakathi kwamagciwane ane-gram-positive, ubhadane lomhlaba wonke lwe-resistant S. aureus (isb., I-methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MRSA) nezinhlobo ze-Enterococcus njengamanje ziyingozi enkulu. Amagciwane angenayo i-Gram afana ne-Enterobacteriaceae (isib., Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa, kanye ne-Acinetobacterare emelana cishe nazo zonke izindlela zemithi elwa namagciwane ezitholakalayo.
I-UIP1000hdT – iprosesa enamandla we-1kW ye-nano-structuring yama-antibiotics afana ne-tetracycline ukukhulisa ukusebenza kwawo ngokulwa namagciwane amelana nemithi elwa namagciwane
Ama-Antibiotic we-Ultrasonically Nano-Sized
Imithi yokwenziwa kohlobo lwe-nano yaziwa ngokugqama ama-molecule wezidakamizwa asezingeni eliphansi kakhulu ngenxa yokwanda kwamazinga wokumunca, ukutholakala okuphezulu nokusebenza ngempumelelo. Ama-antibiotic asetshenziswa kabanzi ukwelapha ukutheleleka ngamagciwane. Kodwa-ke, ukukhula okusheshayo kwamagciwane amelana nezidakamizwa ngokwanda kwenza ukuthuthukiswa okusha noma ukuguqulwa kwemithi yama-antibiotic ekhona kudingekile. Ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana zemithi elwa namagciwane efana ne-tetracycline nge-sonication kungenye yezindlela ezilula, ezisheshayo nezethembisayo zokwenza ngcono ukusebenza kwama-antibiotic ngokumelene nezinhlobo zamagciwane ezingazweli futhi ezingazweli.
I-Ultrasonically NanoI-Tetracycline Ehleliwe
UKassirov et al. (2018) iphathe i-tetracycline ultrasonically ukuthuthukisa ukusebenza komuthi ukulwa nezifo. Ocwaningweni lwabo, basebenzise i-Escherichia coli Nova Blue TcR, uhlobo olumelana nemithi elwa namagciwane, kanye no-E. Coli 292–116 (ngaphandle kokumelana nezidakamizwa). I-Tetracycline, i-antibiotic ebanzi ebanzi, yashintshwa kusetshenziswa i-industrial ultrasonicator I-UIP1000hdT (Hielscher, Germany; bheka isithombe kwesobunxele). Ithimba labacwaningi lithole ukuthi ukwelashwa kwe-sonochemical ne-UIP1000hdT kwandisa ukusebenza kwezakhi zokulwa namagciwane kuze kufike ku-25% uma kuqhathaniswa nohlobo olungazweli kuze kufike ku-100% uma kuqhathaniswa nobunzima obuzwelayo. Ngisho nokugcinwa kwesikhathi eside kwe-tetracycline ene-nanostructured ku- + 4ºC akwehlisi izakhiwo ezilwa namagciwane.
Imingcele yokucubungula ye-ultrasonic efana ne-amplitude, ukufaka amandla, kanye nesikhathi se-sonication kunqunywe njengezici ezibucayi ezinomthelela ekuguqulweni kwezakhiwo ze-antimicrobial kumabili womabili amangqamuzana abucayi futhi amelana nawo.
Ukwelashwa kwe-ultrasonic kuholela ekusatshalalisweni kosayizi wezinhlayiyana ofana kakhulu wezinhlayiya zemithi engalingani, okungaholela ekutholakaleni okuphezulu, ukutholakala kokutholakala kwezinto eziphilayo futhi ngaleyo ndlela kusebenze ama-molecule e-tetracycline.
Imininingwane etholakele ikhombisa ukuthi ukuguqulwa kwe-sonochemical kwama-antibiotic kungaba yindlela entsha ethembisayo futhi eshibhile ekwakhiweni kwemithi emisha ephumelelayo yokwelapha ama-antibiotic emelana nezinkinga zokumelana nemithi.
I-Sonication ye-tetracycline ne-UIP1000hdT.
A - FTIR spectra ye "tetracycline" yamahhala; B - Ukubukeka kwe-FTIR kwe-SN tetracycline ngemuva kwe-5 min sonication; C - Usayizi we-histogram wokusabalalisa we-"tetracycline" yamahhala; UD – I-histogram yokusabalalisa usayizi we-SN tetracycline ngemuva kwe-5 min sonication.
Ukufunda nokubalwa nguKassirov et al. 2018.
I-Ultrasonic Processor I-UIP2000hdT (2kW) nge-batch reactionor
Izinzuzo ze-Ultrasonic Nanostructured Drugs
I-Ultrasonication inikela ngamathuba amakhulu kakhulu wokuhlanganiswa kwento ebanzi yezinto ezisetshenzisiwe futhi isetshenziswa ezimbonini eziningi. Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kwemithi elingana nano efana nemithi elwa namagciwane, ama-anti-virals neminye imithi kuthembisa kakhulu ngoba le mithi elingana nano ikhombisa izinga lokumunca eliphakeme kakhulu, ukutholakala nokusebenza kahle. Ngakho-ke izinhlobo eziningi zezidakamizwa ezithuthukisiwe zibandakanya i-ultrasonication ukuze kwenziwe ama-molecule wezidakamizwa e-nanostructure, afaka izidakamizwa kuma-nano-emulsions, ama-nano-liposomes, ama-niosomes, ama-solid-lipid nanoparticles (ama-SLNs), i-nano-structured lipid carries (NLCs), nokunye ukufakwa okungafani nano izakhiwo.
Ukwakhiwa kwe-Ultrasonic Yezidakamizwa Ezilinganiswe Nano
I-Ultrasonic Solid-Lipid Nanoparticles (i-SLNs)
Izithwali ze-Lipid Carriers ze-Ultrasonic (NLCs)
Isixakaxaka Sokufakwa Kwe-Ultrasonic
I-Ultrasonically Doped and Functionalized Nanoparticles
Ukwakhiwa Komuthi Wokugoma we-Ultrasonic
Ukwakhiwa kwe-Ultrasonic komuthi wokugoma we-Intranasal
Ukwelashwa kwe-Ultrasonic kwama-nanomaterials anezakhi zokulwa namagciwane kuyasetshenziswa ukuhlanganisa izinto ezakhiwe nge-nano (isib. I-nano-silver, i-nano ZnO) nokuzifaka ezindlekweni ukuze kukhiqizwe izindwangu zokwelapha ezilwa namagciwane nezinye izindwangu ezisebenzayo. Isibonelo, inqubo yesinyathelo esisodwa ye-ultrasonic isetshenziselwa ukwenza imichilo eqinile yezindwangu zikakotini ezine-antibacterial ZnO nanoparticles.
Inzuzo ye-Ultrasonic Synthesis Yezidakamizwa Ezilinganiswe Nano
Ukusebenza okuphezulu kokunciphisa usayizi wezinhlayiyana
Ukulawulwa okuqondile kwamapharamitha wenqubo
Ukulawulwa kwe-temp-non-Thermal okuqondile
Ukumiswa kwenqubo / GMP
Izinduna ezihlaselayo nezisebenzayo
Ukulawula okuqondile ngosayizi wezinhlayiyana nokufakwa ngaphakathi
Ukulayishwa okuphezulu kwezidakamizwa kwezinto ezisebenzayo
Isebenza kanjani i-Ultrasonic Synthesis Yezinto Ezakhiwe Nge-Nano?
I-Ultrasonication kanye ne-sonochemistry, okuwukusetshenziswa kwe-high-power ultrasound kumasistimu amakhemikhali, kusetshenziswa kabanzi ukukhiqiza izinto ezisezingeni eliphakeme ze-nano (isib. Ama-nanoparticles, ama-nano-emulsions). I-Sonication ne-sonochemistry inika amandla noma ihlinzekele ukukhiqizwa kwezinto ezisezingeni eliphakeme ze-nano. Inzuzo yokuhlanganiswa kwe-ultrasonic kwama-nano-particles ukulula nokusebenza. Ngenkathi ezinye izindlela zokukhiqiza zezinto ezakhiwe nge-nano zidinga amazinga okushisa aphezulu kakhulu, izingcindezi, kanye / noma izikhathi zokuphendula ezinde, ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic kuvame ukuvumela ukukhiqizwa kwama-nanomaterials asheshayo, asheshayo futhi asebenzayo. Kokubili, imiphumela ye-sonochemical ne-sonomechanical eyenziwe yi-high-intensity ultrasonics inesibopho sokuhlanganiswa noma ukusebenza / ukuguqulwa kwezinhlayiya ezilingana nano. Ukuhlanganisa amagagasi amakhulu e-ultrasonic abe uketshezi kuholela ekuthambekeni kwe-acoustic: ukwakheka, ukukhula, kanye nokuwa okunamandla kwamabhamuza, futhi kungahlukaniswa njenge-sonochemistry eyinhloko (i-gas-phase chemistry eyenzeka ngaphakathi kwamabhulebhu awayo), i-sonochemistry yesibili (i-solution-phase chemistry eyenzekayo ngaphandle kwamagwebu), kanye nokuguqulwa kwe-sonomechanical / ngokomzimba (okubangelwa amajetshi asheshayo wejetshi, ama-shockwaves, kanye / noma ukushayisana kwezinhlayiyana phakathi kwama-slurries). (cf. Hinman and Suslick, 2017) Umthelela wokubamba izinhlayiya kubangela ukunciphisa usayizi, ukwakheka kwe-nano (ukuhlakazeka kwe-nano, i-nano-emulsification), kanye nokusebenza kwezinhlayiyana nokuguqulwa.
Funda kabanzi ngokugaya i-ultrasonic nokusabalalisa izinhlayiya!
I-Ultrasonic Nanostructuring Yezinhlayiyana
Ama-Ultrasonic Probes for the Synthesis of Nano-Structured Pharmaceuticals
I-Hielscher Ultrasonic inolwazi lwesikhathi eside kumklamo, ukukhiqiza, ukusabalalisa kanye nensizakalo ye-homogenisers ephezulu esebenza kahle yomkhakha wezemithi nowokudla.
Ukulungiswa kwezinhlayiya zezidakamizwa ezisezingeni eliphakeme, ama-liposomes, ama-lipid nanoparticles aqinile, ama-nanoparticles ama-polymeric, ama-cyclodextrin complexes, kanye nemithi yokugoma yizinqubo, lapho izinhlelo ze-Hielscher ze-ultrasonic zisetshenziswa kabanzi futhi zibalwa ngokuthembeka kwazo okuphezulu kanye nokukhishwa kwekhwalithi ephezulu. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher avumela ukulawula okuqondile phezu kwazo zonke izinqubo zenqubo, njenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi namandla e-sonication. Isoftware ehlakaniphile icubungula ngokuzenzakalela yonke imingcele ye-sonication (isikhathi, usuku, ubukhulu, amandla wenetha, amandla aphelele, izinga lokushisa, ingcindezi) ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kusiza inqubo nokulawulwa kwekhwalithi kakhulu futhi kusiza ukufeza Izindlela Zokukhiqiza Ezinhle (GMP).
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla olugcwele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze i-mixer ye-shear ye-ultrasonic efaneleke kakhulu kumthamo wenqubo nezinhloso zakho. Lokhu kukuvumela ukuthi uthuthukise futhi uvivinye uhlelo lwakho lokusebenza ngosayizi omncane webhu futhi ulilinganise bese ulingana ngomugqa kumandla wokukhiqiza. Ukukhuphuka kusuka kusihlanganisi esincanyana se-ultrasonic kuye kumandla wokucubungula alula kakhulu ngoba inqubo yokuxubana ye-ultrasonic ingalinganiswa ngokuphelele kusuka kusikali senqubo yakho esungulwe. Ukukhuphuka kungenziwa ngokufaka iyunithi enamandla kakhulu ye-mixer ye-ultrasonic noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningi ngokufana.
Amplitudes aphakeme kuya kuzinhlayiyana zeNanostructure ngokuSebenza okuphezulu
Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ama-sonotrode e-Ultrasonic (izimpondo, ama-probe) nama-reactors atholakala kalula. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo.
Ungathenga ama-processor we-Hielscher ultrasonic nganoma yisiphi isayizi ehlukile futhi amisiwe kahle kuzidingo zenqubo yakho. Ukusuka ekwelapheni uketshezi ku-beaker encane yelabhu kuye ekuqhubekeni okuqhubekayo-ngokuxuba ama-slurries nama-pastes ezingeni lezimboni, i-Hielscher Ultrasonics inikeza i-homogenizer esebenza kahle kakhulu kuwe! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma ukusetha okuhle kwe-ultrasonic!
UP400St – I-400W processor enamandla ye-ultrasonic yezinhlelo zokusebenza ze-sonochemical